Dowladda Soomaaliya Oo Jawaab Adag ka Bixisay Eedeymo Uu Qorey Wargeys kasoo Baxa Kenya. – Awdalmedia
Wargeyska warkan qorey ee Standard ayaa warbixintiisa ciiwaan uga dhigay ‘Soomaaliya oo iibinaysa saliidda Lamu’ iyadoo marka uu wargeyska sheegay inuu arkay Dukumiinti magaciisu yahay ‘Offshore Somalia 2019’ oo laga soo daayay Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Soomaaliya oo muujinaya xirmooyin saliidda Lamu ah oo qayb ka ah kuwa ay dowladda Soomaaliya usoo bandhigtay maalgashadayaasha.
Cabdulqaadir Abiikar oo ah la-taliye sare oo ka tirsan Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Soomaaliya , ayaa u sheegay Hiiraan Online inaysan waxba ka jirin warka uu baahiyay wargeyska Standard ee uu ku sheegay xirmooyin saliidda Lamu inay dowladda Soomaaliya ku soo dartay sahankii la sameeyay.
“Waxaan caddeynaya inaysan jirin goob ka tirsan Kenya oo ay dowladda Soomaaliya ku soo dartay warbixintii la xiriirtay sahanka shidaalka.” ayuu yiri Cabdulqaadir Abiikar oo wareysi gaar ah siiyay Hiiraan Online.
Abiikar , ayaa inta ku daray inuu sahanka ku ekaa xeebaha koonfurta ku yaalla illaa bartamaha oo ku eg deegaannada Galmudug, isagoo marka ka digay in bulshada lagu marin habaabiyo warbixinno sida uu sheegay ‘been abuur ah’.